भारतमा ड्रो’नबाट संक्र’मित कहाँ को’रोना भ्या’क्सिन पु’र्याइदै । – Yuwa Aawaj
भारतमा ड्रो’नबाट संक्र’मित कहाँ को’रोना भ्या’क्सिन पु’र्याइदै ।
बैसाख २६, २०७८ आइतबार 177
ग्रामिण भेगमा बसोबास गरिरहेका कोरोना संक्रमितकहाँ भ्या’क्सिन पु¥र्‍याउन भारत सरकारले ड्रो’न उपयोग गर्न मञ्जुरी दिएको छ।
त्यहाँको नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र महानिर्देशनालयले पहिलो चरणमा ते’लंगना सरकारलाई संक्र’मितकहाँ भ्या’क्सिन पु¥र्‍याउन ड्रो’न प्रयोग गर्न स्वी’कृति दिएको हो। यही महिनाको अन्त्यतिरसम्म यो कामको प’रीक्षण गरिने ते’लंगनाका
सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। यसअघि इ’न्डियन का’उन्सिल अफ मेडिकल रि’सर्च (आ’इसीएमआर) ले को’भिड भ्या’क्सिन पु¥र्‍याउन ड्रो’न उपयोग गर्न शो’ध अनुमति दिएको थियो।
खोप पु¥र्‍याउने यस्ता ड्रो’न उ’डाउँदा हवाई नियम पालनामा केही छुट पनि दिइएको छ। स्वास्थ्य सेवामा संक्रमितको स’हज पहुँचका लागि र चाँ’डोभन्दा चाँडो भ्या’क्सिन उपलब्ध गराउन ड्रो’न उपयोग गर्न लागिएको भारत सरकारले जनाएको छ।
तनहुँ : को’रोना भाइ’रसको नयाँ भे’रियन्ट शुरु भएसँगै तनहुँका १० पालिकामध्ये सात पालिकाले १०० शय्या क्षमताको आइसो’लेसन कक्ष स्थापना गरेका छन् । को’रोना सङ्क्र’मितलाई सुरक्षित स्थानमा राखेर उपचार गर्नका लागि तनहुँका अधि’कांश पालिकाले व्यवस्थित आइ’सोलेशन कक्ष स्थापना गरेका हुन् ।
जिल्लाको शुक्ला’गण्डकी नगरपालिकाले दुई स्थानमा गरी ६५ शय्याको आइ’सोलेशन कक्ष निर्माण गरेको नगर उपप्रमुख सविता रसाइलीले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिका क्षेत्रमा अहिले को’रोना सङ्क्र’मितको सङ्ख्या न्यून रहेकाले आवश्यक देखिए क्षमता वृ’द्धि गर्दै जाने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
ऋषिङ गाउँपालिकाले १०, म्याग्दे गाउँपालिका, भिमाद नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिका, घिरिङ गाउँपालिका र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पाँच÷पाँच शय्याको आ’इसोलेशन कक्ष स्थापना गरेको बताएका छन् ।
व्यास नगरपालिका, भानु नगरपालिका र बन्दिपुर गाउँपालिकाले आइ’सोलेशन कक्ष निर्माण गरेका छैनन् । व्यास–१ कराङकाठस्थित क्षत्री समाजको भवनमा ६३ जना क्षमताको क्वा’रेन्टिन कक्ष निर्माण गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाका १४ वटै वडामा रहेका आमा समूह, सामुदायिक भवन र खाली जग्गामा आइ’सोलेशन कक्ष निर्माण गर्न नगरपालिकाले निर्देशन गरिसकेको उहाँले जान’कारी दिनुभयो ।
भानु नगरपालिकाले गत वर्ष शारदा लोहनी विद्यालयमा २५ शय्या क्षमताको क्वारे’न्टिन बनाएकाले अहिले पनि त्यसैलाई
कायम गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको नगर उपप्रमुख आशा थापाले जानकारी दिनुभयो । पालिकाभित्र को’रोना सङ्क्र’मितको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा तत्कालै आइ’सोलेशन कक्ष स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बन्दिपुर गाउँपालिकाले आइसो’लेशन कक्ष निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । गाउँपालिकाभित्र सचेत’नामूलक कार्यक्रमलाई तीव्र’ता दिँदै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुर्ण’सिं थापाले जान’कारी दिनुभयो । देव’घाट गाउँपालिकाले प्रत्येक नाकामा हे’ल्थ डे’स्क
राखेर उच्च सर्त’कता अपनाउँदै आएको छ । एम्बुलेन्स भाडामा लिएर तयारी अवस्थामा राखिएको र प्रत्येक सामुदायिक वनको पैसाले बिरामी ओसारपसार गर्दा लाग्ने भाडा बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका माध्यमिक तह र स्वास्थ्य चौकीलाई आइ’सोलेशन कक्ष बनाउने योजना रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
Prevमृगौला फेल कसरी हुन्छ ? मृगौला सम्वन्धि यी ७ महत्वपूर्ण जानकारीहरु जानिराखौं !
Nextप्रदेशहरु खारेज गरी, १०० जनाको संसद र १० जनाको मात्रै मन्त्रिमण्डल बनाऔं ।
साउदी कतार वा टर्की भएर नेपाल फर्किन सकिने ।